Miyay Tahay In Diogo Jota Booska Kala Baxo Firmino? Mohamed Salah Oo Su’aashan Miisaanka Culus La Hordhigay Iyo Jawaabtiisa |
HomeCiyaarahaMiyay Tahay In Diogo Jota Booska Kala Baxo Firmino? Mohamed Salah Oo Su’aashan Miisaanka Culus La Hordhigay Iyo Jawaabtiisa
Miyay Tahay In Diogo Jota Booska Kala Baxo Firmino? Mohamed Salah Oo Su’aashan Miisaanka Culus La Hordhigay Iyo Jawaabtiisa
Weeraryahanka kooxda Liverpool ahna hoggaanka weerarka kooxdaas ee Mohamed Salah ayaa si toos ah loo weydiiyay haddiiba uu Diogo Jota oo saxeex cusub ah ka doorbidayo Roberto Firmino oo ay mudo dheer weerarka lamaane kusoo ahaayeen.
Kahor kulankii ay xalay bar-bardhaca 1-1 ah lasoo galeen Man City, waxa jirtay hadal hayn badan oo ah in Diogo Jota uu kasoo hormari doono dhigiisa Firmino.
Jota ayaa ahaa mid ku jiray qaab ciyaareed wanaagsan kulamadii ugu dambeeyay isagoo saddexley goolal ah toddobaadkii hore Champions League saddexley kaga soo dhaliyay Atalanta.
Taas bedelkeeda Firmino ayaa ahaa mid ku dhibtooday goolka hortiisa xilli ciyaareedkan markale balse tababare Jurgen Klopp ayaa doortay inuu kusoo wada bilaabo labadoodaba kulankii xalay.
Haddaba, Salah oo kulanka kaddib saxaafada la hadlay ayaa amaan ugu qubeeyay Jota balse diiday inuu ka hadlo haddii ay tahay in Jota kasoo hormaro Firmino isagoo ku dooday inuusan isagu tababaraha kooxda ahayn go’aankaasna lahayn.
Tan iyo markii uu halkan yimid (Jota) goolal badan ayuu dhalinayay taasina si weyn ayay anaga noo caawisay sababtoo ah hadda dookhyo badan (Oo weerarka ah) ayaanu haysanaa” ayuu Salah kulanka kaddib u sheegay beIN Sports.
Mar la weydiiyay haddii uu Jota kasoo horraysiin lahaa Firmino ayuu Salah yidhi “Anigu taas kama hadli karo sababtoo ah maihi tababaraha, ma go’aamin karo arrin sidaas oo kale ah”
Anigu ma eegi karo waxa uu Firmino kooxda u qabtay iyo waxa uu kooxda siiyo oo ma odhan karo waa inuu keeydka fadhiistaa sababtoo ah natiijada gool dhalintiisa ee dhawaanahani maaha mid wanaagsan, kani (Firmino) waa ciyaaryahan kooxda waxkasta siiyay mudo shan sano ah fursado badan ayuuna abuuraa.